Konke Odinga Ukukwazi Ngokubuyiselwa kweNtengiso | Martech Zone
Konke Odinga Ukukwazi malunga nokuBuyiselwa kweNtengiso
NgoLwesihlanu, ngoJuni 16, 2017 NgoLwesine, uJuni 22, 2017 UGal Glikman
Omnye wemiceli mngeni omkhulu kubapapashi nakowuphi na umthengisi namhlanje ziibhlokhi zentengiso. Kubathengisi, ukunyuka kwamaxabiso okuvimba kubangela ukungakwazi ukufikelela kubaphulaphuli abathandiweyo. Ukongeza, amaqondo aphezulu okuvimba intengiso akhokelela kuluhlu oluncinci lweentengiso, olunokuthi ekugqibeleni lonyuse amaxabiso e-CPM.
Ukusukela oko iibhlokhi zentengiso zadlala ngaphezulu kweminyaka elishumi eyadlulayo, amaxabiso okuthintela inyuko anyuke, afumana izigidi zabasebenzisi kwaye asasazeka lonke iqonga.
Esinye seziphumo zakutshanje zeqela lethu lophando e Phezulu kukuba ireyithi yangoku yokuvimba intengiso e-US ngama-33.1%. Oku kuthetha ukuba abasebenzisi aba-3 kwabali-10 abachanabekanga kwimizamo yakho yokuthengisa. Ngokucacileyo, ngumba oxinabisayo kwilizwe lezentengiso, kwaye ngokulandelelana kwilizwe lokupapasha, elixhomekeke kwintengiso kubukho bayo.
Ingenziwa njani le nto?
Ukuza kuthi ga ngoku, zininzi iindlela zokuzama ukulungisa imeko yokuthintela. Abanye abapapashi bazama ukutshintsha imodeli yeshishini labo kwaye basebenzise iipewalls ukubiza abasebenzisi ukufikelela kwindawo yabo. Abanye, bakhetha ukunyanzela abasebenzisi babo ukuba benze mhlophe iwebhusayithi yabo ngokusebenzisa useto lwebhloko block ukufikelela kumxholo wesiza. Eyona nto iphambili kuzo zombini ezi ndlela kukuphazamiseka kwabo kunye nomngcipheko oza kwenziwa ngabasebenzisi shiya indawo ngokupheleleyo.
Kulapho enye indlela iza khona ukubuyiswa kweentengiso.
Ukubuyiselwa kwentengiso kuvumela abapapashi ukuba baphinde bafake iintengiso ezazisuswe ekuqaleni ziibhloksi zentengiso. Esi sicwangciso sinezibonelelo ezithile ezahlukileyo ngaphezulu kwepakethi. Isibonelelo esicacileyo kukuba nakho ukuhambisa iintengiso kuzo zombini izithintelo kunye nabangathinteli abaphulaphuli. Abapapashi baya kuba nakho ukwandisa uluhlu lweentengiso zabo, abasebenzisi bezahlulo kunye nokujolisa kwimikhankaso ethile kuthintelo lwentengiso kunye nabaphulaphuli abangathinteliyo.
Ngokuchasene noko kunokulindelwa, abasebenzisi be-adblocking babonisa nezinga eliphezulu lokuzibandakanya, ngamanye amaxesha aphezulu kunabasebenzisi abangathinteliyo.
Zithini iintlobo ezahlukeneyo zezisombululo zokubuyiselwa kwentengiso?
Kukho izisombululo ezininzi kwimarike yanamhlanje. Xa kuvavanywa ezahlukileyo, iiparameter ezithile ezibalulekileyo kufuneka zigcinwe engqondweni. Eyokuqala kukudityaniswa-izisombululo zokubuyiselwa kwentengiso zinokuphunyezwa nokuba kukwicala leseva, i-CDN (iNethiwekhi yokuNikwa koMxholo) okanye kwicala labathengi. Zombini iiseva-icala kunye nokudityaniswa kweCDN zinzima kwaye zinomdla kakhulu, kwaye zihlala zifuna utshintsho olukhulu kwinxalenye yomshicileli kubandakanya imisebenzi yabo yentengiso.
Uninzi lwabanini besiza boyika ukudityaniswa kokungenelela, okusisithintelo esikhulu, kwaye baya kuhlala bekhetha ukungasidibanisi isisombululo konke konke. Kwelinye icala, uninzi lokudityaniswa kwamacala abaxhasi lukhawulelwe kwaye lunokujikeleziswa ziibhlokhi zentengiso.
Omnye umahluko obalulekileyo phakathi kwezisombululo ezahlukeneyo zokubuyiselwa kwentengiso kukufezekiswa kwazo. Oku kubandakanya ukuba zeziphi amaqonga abasebenza kuwo, kwaye zeziphi iintengiso abanokuzifumana kwakhona.
Ngaphaya koko, ngelixa abapapashi bafuna ukubonisa zonke iintlobo zeentengiso, kubandakanya iintengiso ezingashukumiyo, iintengiso zevidiyo, kunye neentengiso zemveli, ezinye izisombululo zokubuyisa intengiso zinokubuyisela uhlobo olunye kuphela lweentengiso.
Sithini isisombululo sika-Onit?
I-Onit ibonelela ngeqonga lokubuyisela intengiso elibandakanya bonke, elinakho ukubuyisela konke ukubekwa kwentengiso okuhluthwe ziibhlokhi zentengiso, kuzo zombini izikhangeli eziphathwayo kunye neze desktop. Phezulu kubuyisela umboniso, ividiyo kunye nemikhankaso yentengiso yemveli, kunye nokulandela umkhondo nge-pixel epheleleyo, ukujolisa kwecookie, kunye nenkxaso yokwahlulahlula umsebenzisi.
Isisombululo sethu sisekwe kukudityaniswa okukhawulezayo, kwicala labathengi, ukuvumela ukudityaniswa okungagungqiyo okungafuneki lutshintsho kumncedisi wethu wentengiso okanye kwintengiso.
Umsebenzi we-Juuit kukwenza abanini besiza ukuba bagcine imodeli yabo yeshishini, ngelixa bejonga amava abasebenzisi. Sisebenza ngokuthobela Umdibaniso wezikhokelo zeNtengiso ezingcono, esivakalelwa kukuba sibekelwe umhlaba ophakathi bobabini abapapashi kunye nabasebenzisi.
Sebenzisa i-Pita, umshicileli unokulawula ukuba zeziphi iintengiso ezithunyelwayo kwaye zibekwa phi, kwaye uqiniseke ukuba ezi zikumgangatho ophezulu kuphela kwaye aziphazamisi. Ukongeza, isisombululo sethu inegalelo kulwazi olungcono lomsebenzisi, ngokukhawulezisa amaxesha okulayisha iphepha kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwebhanwidth.
Isebenza njani i-Onit?
Isiphelo kukuba iintengiso ziboniswa kumsebenzisi othintela, nokuba yeyiphi na ibhlokhi yentengiso esetyenziswayo.
Ukwanda kwingeniso yentengiso, ukwanda kuthethathethwano
Xa intengiso ibhloka inqanaba le Mako, I-portal ekhokelela kwezolonwabo kwa-Israyeli, yafikelela kwi-33% kwaye yabonakalisa kakhulu ukusebenza kwabo okusekwe kwintengiso, baqala ukukhangela isisombululo. Njengoko u-Uri Rozen, umphathi we-Mako esitsho, i-Pitit sesona sisombululo sibavumela ukuba baqhubeke neshishini labo lentengiso ngaphandle kweziphazamiso. Ngokusebenzisa isisombululo se-uponit, uMako ukwazile ukubonelela ngemikhankaso yentengiso yokuthintela abasebenzisi ukusukela ngoJuni 2016, kwaye kutshanje, baqala ukukhonza iintengiso zevidiyo kwicandelo lamanqaku nakwinkonzo yabo ebanzi yeVOD. Igalelo lika-Onit kwidesktop kaMako yokubonisa ingeniso ibangele ukonyuka okubonakalayo kwe-32% -39% phakathi kukaJanuwari noMeyi ka-2017.
NgokukaRozen, abasebenzisi be-adblocking babonakalise ukubandakanyeka okufanayo okanye nangaphezulu kunye namanqanaba okugcina kunabasebenzisi abangathinteliyo, ixesha leseshoni eliphakathi likhula nge-3.2%.
UMako ngumzekelo omnye kuphela wamaqabane ethu amaninzi onwabileyo.
Fumanisa Okuninzi kwiPhezulu
tags: intengiso ibhloka kwakhonaUkubuyiselwa kwentengisoizisombululo zokubuyisa intengisoUkuthintela intengisoUkuthintelaumanyano lwezikhokelo zentengiso ezingconoSirayelimakophezu kwayo
Gal Glikman Friday, June 16, 2017 Thursday, June 22, 2017
UGal Glikman ngu-CEO kunye noMseki-ntsebenziswano Phezulu, Isisombululo sokubuyisela intengiso kubapapashi beprimiyamu. Phambi kokusekwa ngokubambisana kwi-Pait, uGal wakhonza kwiyunithi yezobuntlola e-Israel njengegosa, umphuhlisi kunye nomphandi wezokhuseleko kwiminyaka emi-4.5.
Uyonyusa njani uJulius kwi-ROI yokuThengisa
Zonke iinkcukacha ezifuna ukuBekwa kwiNtengiso ye-SEO yaseKhaya